Nagu saabsan - Goldenor Electronic Technology Co., Ltd.
Shirkadda GoldenorElectronic Technology Co., Ltd. waxay midaynaysaa R&D, waxsoosaarka iyo iibinta, oo ku hawlan naqshadaynta iyo soo saarida jiifka rackmount, jiifka serverka, iyo mashiinka warshadaha. Shirkadda waxaa la aasaasay 9/17 ee 2014. Sannadkii 2015, waxay horumarisay badeecooyin u gaar ah oo u gaar ah. 2016, waxay ku guuleysatay shixnad bille ah oo ah 5,000 oo unug oo ah alaabooyinka caadiga ah iyo 30,000 oo cutubyo ah sannadka 2019. Shirkadda shirkaddu waxay ku shaqeyneysaa xaashi bir ahï¼ˆNCTï¼ ‰, naqshadeynta iyo soo saarista, iyo shaambadaynta. Soo-saarista, rinjiyeynta iyo kartida ururinta. Isla mar ahaantaana, shirkaddu waxay qaadataa baahida macaamiisha iyada oo xudunta u ah ay soo uruurisay koox tayo sare leh oo ku saabsan cilmiga teknolojiyadda, waxayna ku dadaaleysaa inay macaamiisha siiso hal-joogsi guud oo lagu xalliyo ka-soo-saaridda naqshadeynta illaa soosaarka maanta markii ay alaabtu si heer sare ah isugu midoobeen.
"Deg deg ah, xad dhaaf ah, oo hal abuur leh" waa falsafada ganacsiga ee Goldenor, "fur, abuur, oo wadaag" waa falsafada maaraynta ee Goldenor. Aragtidayadu waa fikirka hal abuurka aglobal iyo qaabaynta tayada xirfadeed ee serverka iyo wax soosaarka khabiirka, "macaamiisha udub dhexaad u ah" Abuuritaanka macaamiisha la qiimeeyo, oo dadka lahor mariyo, in halgamayaasha lala wadaago hantida shirkadda "waa qiimaheena ugu muhiimsan. Dhamaan xubnaha Goldenor Waxaan joojin doonaa inaan ka badino nafteena oo aan macaamiisha siino alaab iyo adeeg wanaagsan!
Baaxadda codsi wax soo saar: jaakad lagu keydiyo, daruur kumbuyuutar kumbuyuutar kumbuyuutareed, daruur kaydiyaha, shaashadda warshadaha, Nidaamka la socoshada fiidiyowga, nidaamka awoodda korantada, serverka GPU, kumbuyuutarka gees.